Pyston 2 mmejuputa Python na JIT compiler | Site na Linux
Mgbe afọ atọ hiatus na mmepe, e bipụtara mmalite nke ọrụ Pyston 2, gịnị ka m mepụtarana ntinye aka di elu nke asusu Python iji mmepe nke oru LLVM.
Mmejuputa na-anọchi anya maka ojiji nke teknụzụ mkpokọta JIT nke oge a na ebumnuche iji nweta arụmọrụ dị elu dịka asụsụ sistemụ ọdịnala dịka C ++.
Koodu site na nsụgharị ndị gara aga site na Pyston ekesara n'okpuru ikikere Apache, ma Pyston 2 koodu erubeghị ma ọ bụ naanị a na-ewepụta ihe eji ewu maka Ubuntu 18.04 na 20.04 (otu faịlụ nwere koodu ahụ maka nbudata mana enwere naanị isi na ozi na ọrụ ahụ ka mechiri).
Mbipụta koodu ahụ bụ akụkụ nke atụmatụ ndị mmepemana a ga-eme ya mgbe emechara usoro ihe omuma ahia nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ma kpebie ịnọgide na-emepe Pyston na-enweghị nkwado ego nke Dropbox.
Banyere Pyston 2
N'adịghị ka nsụgharị ndị gara aga, Pyston 2 akara akara na ọ bụghị dị ka a ikpe mbipute. Emeela ọtụtụ ọrụ iji bulie arụmọrụ ma Pyston 2 dị ngwa ngwa karịa mbụ Python 3.8 site na ihe dịka 20% mgbe ị na-agafe python-macrobenchmarks test suite.
A na-ahụ ọtụtụ arụmọrụ arụmọrụ pụtara na arụmọrụ ngwa ngwa weebụ. Na ule dị iche iche dị ka chaos.py na nbody.py, Pyston 2 karịrị Python 3.8 site na ihe ruru 2. Ọnụ ego iji JIT bụ ntakịrị mmụba na oriri nchekwa.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịhapụ Pyston v2, mmemme ngwangwa ma dakọtara ngwa ngwa nke asụsụ mmemme Python. 2dị 20 bụ 3.8% ngwa ngwa karịa Python 2 ọkọlọtọ na macrobenchmarks anyị. Nke ka mkpa bụ na ọ nwere ike ọsịsọ na koodu gị. Pyston vXNUMX nwere ike belata ọnụ ahịa ihe nkesa, belata latencies nke onye ọrụ, ma melite nrụpụta ndị nrụpụta.
Pyston v2 dị mfe iji mejuputa ya, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ arụmọrụ Python ka mma, anyị na-akwado ka ị were nkeji ise wee gbalịa Pyston. Ime otu a bu otu n’ime uzo di nfe iji gbalite oru gi.
N'usoro nke ndakọrịta ya na Python, ihe oru Pyston na-touted ka ndị kasị dakọtara ọzọ mmejuputa iwu maka CPython, ebe ọ bụ na Pyston bụ ndụdụ nke isi CPython codebase.
Piston kwadoro ọrụ CPython niile, gụnyere C API maka mmepe ndọtị C. Ejiri Dropbox mepụta Pyston na mbụ, nke 2017 kpebiri ịkwụsị mmepe nke ime. Na mbido 2020, ndị mmepe Pyston hibere ụlọ ọrụ ha, weghachite ọrụ ahụ kpamkpam, ma bido ịrụ ọrụ na Pyston oge niile.
Na JIT, e degharịrị koodu Python ma sụgharịa ya na nnochite nke etiti LLVM (IR, nnọchite etiti). Ọzọkwa, a haziri ndị nnọchi anya IR na ihe njikarịcha LLVM wee gafere na LLVM JIT engine maka ogbugbu, nke gbanwere nnọchite IR n'ime koodu igwe.
Iji nweta ụdị nke ụdị mgbanwe maka mmemme na asụsụ Python na-agbanwe agbanwe, a na-eji usoro amụma puru iche nke ụdị ihe, wee kọwaa nke nhọrọ ziri ezi nke ụdị n'oge ogbugbu.
Ya mere, Pyston na-agbanwe mgbe niile ihe dị n'etiti alaka abụọ: ngwa ngwa, mgbe ọnụego ndị ahụ buru amụma gosipụtara, yana nwayọ, nke ejiri ya bụrụ ụdị adịghị mma.
Enwere ike ịrụ ọrụ ahụ n'ọtụtụ ọnọdụ, na-ekwe ka mmekorita nke usoro nke koodu dị iche iche na asụsụ Python na enweghị onwe ya site na mkpọchi ntụgharị okwu ụwa (GIL).
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, you nwere ike ịlele nkọwa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Pyston 2 mmejuputa Python na JIT compiler
Rorjọ obodo: Ọmarịcha Onye mbụ (FPS) egwuregwu maka Linux